Yangoku, igumbi lokulala eli-1 kunxweme lokuqubha lwasePringle Bay
Pringle Bay, Western Cape, eMzantsi Afrika
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguZahira
Indlu yanamhlanje yonke malunga nendawo. Izinyuko ezimbalwa (ngokoqobo) ukusuka kwindawo yokuqubha engundoqo yasePringle Bay kunye nolwandle lokusefa. Indawo enkulu kunoko bekulindelekile evulekileyo ecwangcisiweyo. Indawo yokuphumla kunye neyokutya ikufuphi nebhedi yeQueen. Ikhitshi elincinane liphethe imicrowave, ifriji kunye nezinto eziyimfuneko kwikofu, iti & nesnacks. Ishawa elungiselelwe kakuhle, igumbi lokuhlambela labucala. Indawo yentendelezo yabucala yenza indawo yabucala ngokupheleleyo ukusuka kwindlu enkulu yaselwandle.
Umrhumo wokucoca usetyenziselwa ukucoca ipropathi emva kokuhlala kwakho naphambi kokufika kwakho. Akukho nkonzo yokucoca enikezelwayo ngexesha lokuhlala kwakho.
I-PRINGLE BAY Malunga neekhilomitha ezingama-85 ukusuka eKapa nangaphantsi kweyure ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, nantsi ilali ekhethekileyo nenomtsalane engaselunxwemeni ekwiNdawo yoLondolozo lweNdalo yeHlabathi. IPringle Bay ingqongwe ziintaba kumacala amathathu kwaye ijonge ulwandlekazi neCape Point mgama. Igcwele izilwanyana zasendle kunye neentyatyambo ezintle kwaye iyinxalenye yeSithandathu soBukumkani beeNtyantyambo zeplanethi. Kukho iintlobo ngeentlobo ezimangalisayo zonxweme kunye neendlela zokuhamba intaba ePringle Bay kunye neelwandle ezifihlakeleyo.
Kukho ichweba elincinane elinamanzi acwengileyo nashushu apho uMlambo iBuffels ungena elwandle.
Abahlanguli bobomi basemsebenzini ngelixesha leeholide. Akukho zibhasi zivumelekileyo kwaye ulwandle alugcwalanga ngeKrisimesi. IPringle Bay yenye yeendawo ezimbalwa eMzantsi Afrika ezijonge emantla, yaye ukutshona kwelanga kuyamangalisa.
IINDLELA ZOKUTYA NOZONWABO: IPringle Bay yaziwa ngomculo wayo wobomi kunye nokuzonwabisa, kwaye ngeendawo zokutyela ezahlukeneyo zithathwa njengenkunzi yokutya kule ndawo.
Abahlali Apha uya kufumana umxube onika umdla wabancinci nabadala, abahlali baseMzantsi Afrika nabaphesheya kolwandle. Ngoku ithathwa njengedolophu yaseZoom kukho inani elihlala likhula labahlali abancinci abasisigxina.
Umbuki zindwendwe ngu- Zahira
I love travel and I love my family - mix the 2 - I love traveling with my family Home and there's no place like it is Cape Town South Africa
UJulia esisebenzisana naye ngumhlali wasePringle Bay kwaye uyakwazi ukukunceda xa kufuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pringle Bay